मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डमा काम सुरु - ढोरपाटन पोष्ट
जेठ मसान्तभित्र सडक कालोपत्रे हुने आयोजना कार्यालयको प्रतिवद्धता
२०७७ मंसिर २५, बिहीबार १४:१६
मध्यपहाडि लोकमार्गको बागलुङ खण्डमा सडक निर्माणको काम सुचारु भएको छ । राष्ट्रियगौरवको आयोजना निर्माणमा ठेकेदारले समयमा काम नसक्दा भएको ढिलासुस्ति प्रति जिल्लामा स्थित राजनीतिक दल र सरोकारवालाले लोकमार्गको काम छिटो सक्न ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।
यसैबीच लोकमार्गले विहिबारबाट सडक निर्माणको काम सुरु गर्ने भन्दै, सूचना समेत जारि गरेर सडकमा सञ्चालन हुने सवारी साधन सञ्चालनमा दैनिक रुपमा केही समय अवरुद्ध हुने जनाएको छ ।
आयोजना कार्यालय कुस्मा पर्वतका अनुसार, बागलुङ नगरपलिकाको वडा नं. ३ बोक्सेखाल्टा र काठेखोला गाउँपालिकाको वडा नं. १ खहरे क्षेत्रमा मंसिर २५ गतेदेखि आगामी पौष १५ गतेसम्म दैनिक विहान ७ वजेदेखि ९ वजेसम्म र दिउँसो ११ वजेदेखि ३ वजेसम्म सडक अवरुद्ध हुने सूचना जारि गरेको हो । सो खण्डमा काम सूचारु भएको मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग आयोजनाका पर्वत कार्यालय प्रमुख जयलाल मरासिनीले बताउनुभयो । उहाँले सडक निर्माणमा सहयोग गर्न प्रशासन, राजनीतिक दलसहितको बैठकमा ठेकेदारको प्रतिवद्धता चाहिएको बताउँदै एक अन्तरक्रियाबाट सो प्रतिवद्धता आएको छ । अव सडक निर्माणले गति लिने जानाकारी दिनुभयो ।
जिल्ला सदरमुकाम बागलुङबजारदेखि अक्षेते खण्डमा ४९ प्रतिशत र बिहुँ खण्डमा ५५ प्रतिशत प्रगती भएको आयाृजना कार्यालयको दावी छ । दुवै आयोजनाको म्याद भने माघ दोश्रो साता सकिने तथा ठेकेदारले सहज वातावरण भएमा आगामी जेठ मसान्त भित्र काम गर्ने आयोजना कार्यालय प्रमुखले प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।